विशेष प्राधिकरणको सिइओ छोडेर चुनाव लडेका पोखरेललाई हराइन दुर्गाले
Ujyaalo सोमवार, मंसिर २५, २०७४ १०:२७:००
प्यूठान, मंसिर २४ – प्यूठान क्षेत्र नं. १ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल विजयी हुनुभएको छ । उहाँ ४७ हजार ५ सय १४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका डा. गोविन्दराज पोखरेलले ३१ हजार २ सय ८६ मत ल्याउनुभयो ।
पोखरेल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओबाट राजिनामा दिएर चुनाव लड्न प्यूठान पुग्नुभएको थियो । प्यूठानमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी जनमोर्चाकी दूर्गा पौडेलले पोखरेललार्इ हराउनुभएको हो ।
दुर्गा पौडेल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ हुनुुहुन्छ । पौडेलको जन्म २०२८ साल असोज ६ गते कपिलवस्तुको निग्लिहवा –२, मा भएको हो । उहाँको बुवाको नाम विष्णुप्रसाद पौडेल र आमाको नाम बुद्धदेवी पौडेल हो ।
स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ पूरा गरेकी पौडेलले २०४१ सालदेखि कम्युनिष्ट राजनीति सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो महाधिवेशनबाट अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । दुर्गा पौडेल अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र प्रवक्ता हुुनुहुन्छ ।
उहाँले २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा मसालका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहसँग विवाह गर्नुभएको थियो । ६० वर्ष पार गरेका नेतासँग विवाह गरेको भनेर उहाँहरुको विवाहको आलोचना पनि भएको थियो ।
दुर्गा पौडेल २०५६ सालको चुनावमा कपिलवस्तुबाट चुनाव लडे पनि पराजित हुनुभएको थियो । यस्तै उहाँ २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं १० बाट पराजित हुनुभएको थियो । २०७० सालको चुनावमा उहाँ समानुपातिकबाट सभासद बन्नुभएको हो । अहिले उहाँ वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएको हो ।